Ubanjwe esibhedlela osolwa ngokuduna imoto nokudubula iphoyisa – LIVE Express
Zigcine zimkhalele owesilisa obefunwa uthuli ngamaphoyisa ngezinsolo zokuduna owesifazane imoto kanye nokudubula iphoyisa ezigamekweni ezehlukene kodwa ezihlobene e-Chatsworth kanye nase-Quarry Heights.
Ngokombiko wamaphoyisa, kusolakala ukuthi owesifazane oneminyaka engama-38 ubudala wayehlehlisa imoto yakhe yohlobo lwe-Kia Rio, e-silver-grey endaweni ahlala kuyona e-Welbedacht Road, e-Chatsworth, mhla zingama-25 August 2016, ngenkathi edunwa imoto abalisa ababili, omunye owayehlome ngesibhamu.
“Bamuphoqa ukuba aphume emotweni bemkhombe ngesibhamu maqede bahamba ngemoto, badubula kathathu emoyeni,” kubika amaphoyisa.
Emva kokuvulwa kwecala lokudunwa kwemoto esiteshini samaphoyisa e-Chatsworth amaphoyisa athola imoto eyebiwe e-Tafelkop, KwaNdengezi, ngobusuku obufanayo.
Amaphoyisa athi abasolwa ababesemotweni bavulela ngenhlamvu bebhekise emaphoyiseni, namaphoyisa aphendula ngenhlamvu ebhekise kubasolwa kodwa akhekho owalimala kanti nomsolwa wagcina ekwazile ukubaleka.
Kwaphinde kwavulwa elinye icala lokuzama ukubulala esiteshini samaphoyisa KwaNdengezi.
Ngosuku olulandelayo amaphoyisa ase-Greenwood Park athola le moto eyebiwe ku-Mpungushe Road, e-Quarry Heights.
“Kwaqala ukudubulana phakathi kwamaphoyisa nabasolwa kwabe sekudubuleka iphoyisa elineminyaka eyi-26 ubudala emlenzeni wesokudla kanye nasesiswini,” kuqhuba amaphoyisa.
Abasolwa kuthiwa bayishiya imoto, babaleka ngonyawo kanti kwaphinde kwavulwa amanye amacala okuzama ukubulala kanye nokucekela phansi impahla esiteshini samaphoyisa e-Greenwood Park.
Umsolwa zigcine zimkhalele ngoLwesibili kulandela ukuvundululwa kwakhe ngamaphoyisa esibhedlela i-G.J Crookes Hospital, e-Scottburg. Kuthiwa wangena kulesi sibhedlela ngegama okungesilona elangempela.